Milaza ho manaja ny fahalalaham-pitenenana nefa mamotopototra mpanao gazety sy mpitsikera ny governemanta vaovaon’i Malezia · Global Voices teny Malagasy
"Miankina aman'aina ny fampanjakan-dalàna saingy tsy ekena ny fanjakana ratsy lalàna."
Voadika ny 16 Jolay 2020 5:34 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, English, Nederlands, Español, English
Minisitry ny Serasera sy ny Haino Aman-jery Marolafy Saifuddin Abdullah vao haingana nampanantena ny hamerina hijery ny fampiharana ny Lalàna mifehy ny Serasera sy ny Haino Aman-jery Marolafy izay nampiasaina hiampangana ny mpanao gazety, ny mpitarika ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpitsikera ny governemanta. Loharano: Flickr / Sarin'ny Departemantam-panjakana Amerikana / Ho an'ny daholobe
Maneho ny ahiahiny momba ny firongatry ny tranga hanenjehana ireo mpanao gazety, bilaogera, mpitarika ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpitsikera ny governemanta vaovaon'i Malezia ny vondron'ny fampahalalam-baovao sy ny zon'olombelona.
Eo ambanin'ny andininy faha 233 (1) (a) amin'ny Lalànan'ny Serasera sy ny Haino Aman-jery Marolafy (CMA) ny ankabeazan'ny fiampangana izay mandrara ny rehetra “hampiasa ny fitaovan'ny tambajotra ka minia manao na mamorona na mangataka na manangana fifandraisana izay mamoafady, tsy mendrika, tsy marina, mandrahona na manafintohina amin'ny finiavana hanorisory, hanararaotana, handrahonana na hanasotasota olon-kafa.”
Voasazy handoa vola hatramin'ny RM50,000 (11,700 dolara amerikana) na sazy an-tranomaizina herintaona raha meloka amin'ity fiampangana ity.
Vondrona maro no nanao fanentanana ny amin'ny tokony hijerena indray na hanafoanana ity lalàna ity izay nampiasain'ny manampahefana handrahonana ny fampahalalam-baovao, hampitahorana ny mpanohitra ary hampanginana ny mpitsikera an-tserasera.
Tsy nahomby tamin'ny fanitsiana ny lalàna henjana hatreto ny vondrona mpanohitra Pakatan Harapan izay nandray ny fahefana tamin'ny taona 2018 na dia teo aza ny fampanantenana nataony tamin'ny fahalalahana maneho hevitra.
Ankoatra izany, niteraka ahiahy ny fahatongavan'i Muhyiddin Yassin tamin'ny volana Martsa ho Praiminisitra vaovaon'ny firenena taorian'ny fampifandanjana ny fitondrana fiaraha-mitantana fa hitarika ho amin'ny famohazana indray ny fanjakazakan'ny antoko Fikambanana Nasionaly ho an'ny Malays Mikambana (United Malays National Organisation-UMNO) izay nolavin'ny mpifidy tamin'ny taona 2018 izany.
Nilaza i Muhyiddin fa vonona hiara-hiasa amin'ny UMNO- antoko lehibe ao amin'ny fiaraha-mitantana nasioanly Barisan izay nitondra an'i Malezia nandritra ny am-polony taonany maro hatramin'ny fahareseny tamin'ny taona 2018- ny antoko politikany Bersatu.
Nandany lalàna maromaro ny governemanta notarihan'ny UMNO, ao anatin'izany ny CMA, izay nolazain'ny mpitsikera fa natao hikendrena hanafoanana ny fahalalaham-pitenenana.
Tao anatin'ny telo volana izay, voampanga ho nohamafisin'ny governemantan'i Muhyiddin ny famoretany ny feon'ny mpanohitra, miaraka amin'ny CMA izay natao manokana hanenjehana ireo mpitsikera.
Nahitana ilay bilaogera Dian Abdullah ny tranga farany, izay voampanga tamin'ireo bilaogy roa izay voalaza fa nandika ny andininy faha 233 (1) (a) ao amin'ny CMA.
Natolotra ny fitsarana tao Kuala Lumpur ilay bilaogera tamin'ny 9 Jona ary nahazo fahafana vonjimaika rehefa nandoa onitra.
Nanakiana ny fitantanan'i Muhyiddin sy ny tsy fetezan'ny fanampiana nomen'ny governemanta hamindrana monina ireo mpiasa sy mponina nandritra ny valan'aretina COVID-19 ny bilaogin-dahatsorany roa navoaka tamin'ny 21 sy 23 Martsa.
Nomelohin'ny fitsarana ilay bilaogera Dian Abdullah androany teo ambanin'ny lalàna andininy faha 233 amin'ny Lalàna mifehy ny Serasera sy Haino Aman-jery Marolafy taorian'ny nanambarany ny fanoherany ny Fanjakana.
Fotoana izao handavantsika ireo fihetsika ireo izay mampangina ny feon'ny mpanohitra. Tsy maintsy miroborobo ny fahalalahana maneho hevitra!
Nampahafantatra ny mpikambana sasany ao amin'ny mpanohitra sy ny fiarahamonim-pirenena ihany koa ny manampahefana fa eo am-panaovana famotorana izy ireo noho ny famoahana fanambarana an-tserasera izay voalaza fa nandika ny lalàna.
Ny mpanorina ny Foibe miady amin'ny Kolikoly sy ny Kiantranoantrano Cynthia Gabriel ny iray amin'ireo miatrika fanadihadiana.
Namoaka fanambarana tamin'ny volana Martsa ny vondron'i Gabriel nanameloka ny “governemantan'i Muhyiddin tsy voafidy”.
Nampanantsoina atao fanadihadiana eo ambanin'ny lalàna andininy faha 4 amin'ny Lalànan'ny Fiokoana sy ny andininy faha 233 amin'ny Lalàna mifehy ny Serasera sy ny Haino Aman-jery Marolafy ny tale mpanorina anay, Cynthia Gabriel. Mifandray amin'ny fanambarana navoakan'ny Foibe C4 tamin'ny 14 Martsa mitondra ny lohateny (https://t.co/abVX0fXUC3) ity fanadihadiana ity.
Nampanantsoin'ny polisy tamin'ny 3 Mey noho ny tatitra nataony, izay voalaza fa nandika ny lalàna CMA ilay mpanao gazety Tashny Sukumaran, mpitati-baovaon'ny South China Morning Post any Hong Kong, nandritra izany fotoana izany.
Momba ny famoretana nataon'ny polisy tamin'ireo mpitsoa-ponenana Rohingya ny tatitra voaresaka.
Saingy nanazava ny Minisitry ny Serasera sy ny Haino Aman-jery Marolafy Saifuddin Abdullah fa efa nanome toromarika ny polisy hampiato ny fanadihadiana ny biraony. Nampanantena ihany koa izy fa hamerina hijery ny lalàna niteraka resabe.
Manohy ny fampiasana amin'ny fomba henjana ny CMA ny governemanta hanenjehana ireo mpitsikera an-tserasera ka nahatonga ny vondrona maromaro hitaraina fa niha-ratsy ny fahalalahana maneho hevitra teo ambany fitondran'ny governemanta vaovao.
Nanamafy ny fangatahany hanafoana ilay lalàna henjana mifehy ny fampitam-baovao ny Biraon'ny Asa Fanaovan-gazety Mahaleo Tena.
Tokony hajanon'ny governemanta ny fanamelohana sy ny famotopotorana ireo olona eo ambanin'ny lalàna henjana toy ity andininy ity noho ny tsy fitovian-kevitr'izy ireo amin'ny fanjakana sy ny manampahefana.
Tena tsy mifanaraka amin'ny tanjona ara-dalàna amin'ny fiarovana ny filaminam-bahoaka ny fiampangana votoaty izay mety hiteraka olana sy mitana ny Fanjakana ho tompon'andraikitra. Mila tontolo mampiroborobo ny fisainana mitsikera sy ny adihevitra madio isika izay manohana ny demokrasia sy ny fahaiza-mitantana.
Nanazava ny antony maha-ratsy ny lalànan'ny CMA andininy faha 233 i Bernice Chauly ao amin'ny Pen Malaysia:
Zava-dehibe ny fampanjakana ny lalàna saingy tsy ekena ny fampanjakana lalàna ratsy. ‘Lalàna ratsy’ ny andininy faha 233 satria midadasika be loatra ka afaka mitory any amin'ny polisy avokoa ny Maleziana rehetra satria ‘sorena’ izy ireo, na izy ireo ilay lazaina fa naharay na lasibatra tamin'ilay serasera.
Nandritra izany fotoana izany, dia nihantsy nanoloana ny mety hampanginana ny tatitra ataony i Tashny Sukumaran:
Ny tiako HAMBARA aminareo dia izao: mampanantena anareo rehetra aho – ireo izay tia ny tatitra ataoko *sy* ireo mankahala izany ary miantso ahy ho manala-baraka amin'ny fanavakavaham-bolonkoditra amin'ny Aterineto- fa tsy hijanona aho. Mendrika ny hahalala ny marina daholo ianareo rehetra. Eto aho hilaza ny marina amin'ny fitondrana, tsy matahotra na mila sitraka.